Ukuhamba kunye nenja-Into omele uyiqwalasele ngayo
Iziqulatho zekhemisi yezilwanyana
Yintoni ekhoyo kwimpahla yenkampani?
Ekubeni ekugqibeleni ebudeni beentsapho ezifanelekileyo, kodwa yintoni enokuyenza ngophulo lomntu othandekayo? Kuya kuba nzima kakhulu ukuthabatha inja kunye nohambo olukhulu kunokuba ubenikezele kubahlobo, izalamane okanye inja yenja. Kodwa xa uhamba nenja kufuneka ucingelwe kakhulu!
Emva koko, ininzi inja yilungu elidibeneyo lentsapho. Phantse yonke intsapho yesibini icwangcisa inja yonyaka yeholide, eyongeza into eninzi kwintlangano kunye nokucwangciswa. Yintoni omele uyihlawule ngayo kwaye yintoni ekufuneka yenziwe kwaye icaciswe ngaphambi kweeholide, uya kufumana apha.
Ukuba umntu akafuni ukuyeka inkampani eyaziwayo yomhlobo onamaqhina amane kwiholide kumazwe angaphandle, omnye kufuneka aqale acinge ngendawo efanelekileyo. Akubona onke amazwe afanelekileyo apha. Ngoko ke kungekhona nje abantu, kodwa inja ingakujabulela iholide ekugqibeleni, ngoko ke kufuneka ujongane neemfuno zabanye abathathi-nxaxheba.
Kwizinja, kuyamnandi xa kungabi kushushu kakhulu kwaye kunomswakama. Ukongeza, kufuneka kube nomthunzi kunye nenja kufuneka inikwe ithuba lokuthatha umhlalaphantsi kwikona elimnyama yekhaya leeholide okanye indlu.
Ngaba ungathanda ukuthatha iholide ehotele, cela ngokuthe ngqo ukuba izinja zivunyelwe ehotele nonke. Ngokuqhelekileyo, kunjalo, oku kuyenzeka ngenkokhelo encinci.
Kufuneka uhlawule ngakumbi umhlaba. Ingaba inja iyavunyelwa apho? Yimiphi imithetho yokukhokela inja isetyenziswa apho? Uhambo luhamba njani-ngemoto, ukuqeqesha okanye nokuba yindiza?
Akunakunyanzelwa ukuba yiyo neemfuneko zokungenaeziyahlukahluka ngelizwe. Ulwazi lunokufumaneka apha ngokubanzi kwiiwebhusayithi zeenqwelo zeenqwelo-moya (ukuba uhambo lubangelwa yinqwelo) okanye i-Ofisi yangaphandle. Ngokomzekelo, inja kufuneka igonywe ubuncinane iiveki ze-6 ezedlulileyo ngokuchasene nezidlova xa uhamba kwelinye ilizwe, ipasipoti yeefowuni kufuneka ngoko ke iqhutywe.
Sekudlulileyo iiveki ezimbalwa ngaphambi kokuqala kweeholide elilangazelela, kufuneka uvelise uboya bakho ekhaleni kwigqirha yakho yezilwanyana uze uhlolisise. Ukuba izitofu zisadingeka ngokuhambelana neemfuno zokungena kwilizwe leeholide, khuluma ne-vet yakho emva koko.
Udokotela wezilwanyana othe tye uya kukukhomba kwingxoxo nayiphi na ingozi kwindawo ekuya kuyo / kwilizwe eliya kuyo kwaye uchaze ukuba yiyiphi inzathelo ekufuneka ithathwe xa kwenzeka nayiphi na imeko.
Ngokukodwa izilwanyana zasemazweni aphesheya zihlala ziphazamiseka zizifo ezingenakwenzeka ukuba zijongane neJamani. I-Leishmaniasis, i-heartworms kunye ne-ehrlichiosis zimbalwa nje zentsholongwane kunye nezifo ezithwalwe zizifo ezinokutshabalalisa ngokukhawuleza. Kulo mba: Uluqaphele ngakumbi kunokunyamezela.
Xa ukupakisha, kubaluleke kakhulu ukubeka ndawonye i-petrm e-petry, engabandakanyi kuphela imithi yodwa inja yakho, kodwa kunye nezinye izinto ezingase zilahleke kwiholide:
- Ukukhuselwa kwelanga kwizinja ezimfutshane
- I-Tweezers, i-gauze bandage, i-compress stress
- Izamehlo nezindlebe
- Uludwe lwabagqirha bezilwanyana kunye neekliniki zezilwanyana kwindawo ekuya kuyo
Ewe, kungekhona nje umntu ofuna iimpahla. Inja kufuneka, ukuba kungenjalo kwi-suitcase yakhe, yenza yonke into ayifunayo ukuze uhlale ukhululekile kwaye ujabule. Ngoluhlu olucwangcisiweyo lwangaphambili ungakwazi ukulugcina lula.
Kubalulekile apha - ngokungafani nathi bantu abafuna ukufumana ezininzi izinto ezintsha kwiholide - izinto eziqhelekileyo enjaziyo nolwaziyo ukusuka ekhaya. Oku kwenza kube lula ukuba inja iziva kakuhle kude nekhaya.
Inja imithwalo xa uhamba nenja ngokuyinhloko:
ukutya okuqhelekileyo, ukuphatha, amathambo okuhlafuna
- Ukutya nokusela isitya
- kuxhomekeke kwiqondo lokushisa kwiindawo zokupholisa
- Ibhotile yamanzi yokuhamba
- izilwanyana / izilwanyana ezigxiliweyo
- Uhlobo lwekhemisi lokuhamba
- Buza, xa kuyimfuneko
- Leash, harry, collar
- Idilesi yedilesi kunye nedilesi yezindlu / ihotele nenombolo yefowuni
- Kotbeutel, inkunzi yomlo
- EU yepaspoti yepilati
- Amaphepha e-inshorensi yemfanelo
- Ukunyamekela i-paws, amehlo kunye neengubo
- jacket yobomi
Ngaba uye wacinga ngezinto zonke ukuze inja yakho ikwazi ukuvakalelwa kakhulu kwiholide njengoko wenzayo? Ingaba uluhlu lokutshekisha lukhutshwa kwaye ibhokisi lokuthutha inja lihambelana neemeko zendiza kunye nepasipoti yepilini kwisikhwama?
Emva koko sinqwenela iholide enomdla kunye neenja!
Umbala wephepha lombala kunye nenja
Inja yembala yebala ngeentliziyo
Indlela yokupenda inja
Inja yephepha yokubala
Inja yemifanekiso kunye nenja